Ubudlelwane: Imibhangqwana edibeneyo yobabini Umvuzo weZiseko
Ikhaya ubudlelwane Ababini Bonding Bonding
Nangona umtshato ngokwawo ungaba yindawo edibeneyo yentlalo, umnqweno wokuba ube ngumntu omncinane unobomi. Ubundlobongela kunye nokudibanisa bobabini imivuzo yemvelo. Abantu bayingxenye yeqela elingaphantsi kwe-5% yezilwanyana ezincelisayo bhondi. Oku kuthetha ukuba sinesiseko seengqondo esivumela ukuba sitshatile ebomini, sibe sisigxina somntu, njengama-swans. Basivumela ukuba sidibanise ixesha elide, ixesha elide kubanakekeli ababini ukuba bakhulise abantwana babo. Nangona kunjalo ukuba 'ngumntu onguhlobo lomntu' akufani 'nokuba ngumntu oyedwa wesini'. Isilingo 'sokudlala kude nekhaya' kukho phantse zonke izilwanyana ezibandakanya abantu. Uhlaziyo oluhle lweencwadi lufumaneka Apha.
The inkqubo yokuvuza yilapho iindawo ezidibeneyo zidibeneyo. Ziyizakhiwo ezifanayo ezisishukumisela kwenye imbuyekezo yemvelo yokutya namanzi. Ngokudabukisayo, yilapho nalapho kuqhutywe khona umvuzo okanye umvuzo wokuba utywala, i-nicotine, kunye neziyobisi zichaphazela. Baqhawula inkqubo yovuyo / umvuzo. Enyanisweni, imivuzo yokufakelwa i-cocaine kunye notywala kunokuvelisa umvakalelo ovuyayo ngakumbi kunokwesini. Abaphandi baye bafumanisa ukuba abaxhamli bebini, xa befaniswa nezilwanyana ezinobungqingili ngokwemvelo, banokuthi banomlutha. Siza kubona kamva phantsi kwe-Coolidge Impact apha ngezantsi ukuba kutheni le yingxaki yangempela yokugcina uthando.
Ukubambisana nokuthembela kubalulekile. Sisoloko sifuna ukubonakalisa uthando emzimbeni wethu njengokungqongqoza, ukumanga, ukunyamezela, ukungena kunye nokulala. Uthando olunothando "lususa isilo esibi" kwaye luphilisa kakhulu. Imibhangqwana enobudlelwane obuthandanayo ngokwenene ngokwenyama philisa ngokukhawuleza emva kokulimala. Enoba sicinga ngothando ngokuphathelele 'ukuthandana' ngothando, okanye ukukhwabanisa nokukhanga, le mivakalelo nemvakalelo iqhutywe kakhulu kwingqondo. Ngoko ngokufunda ngokubhekiselele kwindlela esinokusebenza ngayo ubuchopho kuya kusinceda sibe neengxaki eziphucula ubomi ngendlela engokwemvelo ngokuqhubekayo.
<< Uthando njengoBophelelwano Thanda njengenqweno yesondo >>